Lokho Abakhangisi Abakholelwa Kukho Ukuphumelela Okuphezulu Oku-3 Ekuthwebuleni Imikhondo | Martech Zone
Abantu abakhulu ku I-Formstack kuhlolisiswe amabhizinisi angama-200 amancane naphakathi naphakathi ase-US kanye nokungenzi nzuzo ukuthola ukuthi abathengisi bahamba kahle kuphi nokungalungi ngamasu abo okuhola. Le infographic ingumbono ogcwele I-State of Lead Capture ngo-2016 bika ngokuqonda okubaluleke kakhulu kuzinselelo namasu wokuhola wokubamba.
Landa i-State of Lead Capture ngo-2016
Ukutholwa kwabo kokuqala, lokho kumaketha kudinga ukuqonda kwifayela le- ukuthengisa okuvaliwe, kungaphezu kokugxeka. Kuyathakazelisa ukuthi izinkampani eziningi ziqhelisa ukuthengisa kusuka kwezokumaketha - ikakhulukazi uma zisebenza ne-ejensi. Kukhona ukwesaba okumangazayo kokuthi uma wabelana ngalolo lwazi ne-ejensi yakho yezentengiso futhi uphumelela kakhulu, inkampani yakho yezentengiso ingahle yehlise ijubane ekukhishweni kwayo noma inqume ukukhuphula amanani ayo. Uma lokho kungukwesaba kwakho… udinga i-ejensi entsha yokumaketha.
Bangu-19% kuphela abathengisi abasebenzisa isoftware yokuthengisa ye-CRM ukulandela umkhondo wabo omuhle kakhulu
Ukutholwa kwesibili ukuthi abathengisi kufanele banciphise chitha ekukhangiseni ezokuxhum. Angivumelani neze. Ngicabanga ukuthi yini okumele yenziwe ngabakhangisi, esikhundleni salokho, ukunciphisa ukulindela kwabo ukuthi ukukhangisa ezinkundleni zokuxhumana kuzoveza imikhondo eqondile (ngaphandle kokuphinda umakethe). Sivame ukusebenza isu elikhokhelwayo namakhasimende lapho sifuna ukuguqulwa ngosesho olukhokhelwayo, kepha sithuthukisa okuqukethwe ngemithombo yezokuxhumana ukwakha ukwethembana nokuqwashisa.
Uma ulinganisa impumelelo yokuthengisa kuphela ukuthi ngubani ogcine ukuhola, ngokuthembekile awusebenzisi isu elihle leziteshi eziningi ngenhloso yabafundi abafanele. Imithombo yezokuxhumana ingumthombo omuhle engingakhuthaza abathengisi ukuthi benyuse imali abayisebenzisayo, hhayi ukwehla.
I-78% yabakhangisi basebenzisa i-Google Adwords nokukhangisa kwezokuxhumana
Ukutholwa kokugcina, ukuguqulwa kokuhlelwa, futhi iseluleko esiqinile. Kungihlaba umxhwele ukuthi bangaki abathengisi abazama njalo ukuthola imithombo emisha yezivakashi ngenkathi benganakekeli futhi beguqula izivakashi abanazo. Ukuhlola i-verbiage, ukunikezwa, amakhasi okufika, amafomu, izakhiwo, imibala, amadizayini, amavidiyo, amasayithi, izibuyekezo zomphakathi… konke okuhambisana nobukhona bakho bedijithali kuzokhuphula amazinga wokuguqulwa.
Amasu wokwenza ngcono awapheli njengoba ubuchwepheshe obusha, isimilo sabasebenzisi kanye nezindlela zokwakha ziqhubeka nokuvela. Sebenzisa analytics, amazinga wokuguqulwa, nokuhlolwa kwe-A / B ukukhuphula izivakashi onazo kumakhasimende.
Ama-45% wabakhangisi abakwazi ukubopha ukutshalwa kwezimali ezindaweni ezithile zokuthinta nomkhiqizo wabo
Tags: ukuhlolwaAma-AnalyticsUkuguqulwaukuguqulwa kokuhlelwaamazinga wokuguqulwaukuguqulwaformstackinfographicukuhola phambilizokuxhumana phambili leadimithombo yezokuxhumana iyaholatesting
Abaningi bafunda ngezinto ezibalulekile ezinjengalezi. Ngiyabonga ngolwazi nolwazi.